Summary of books in Nepali /"Energy" पुस्तकको नेपालीमा सारांश - LweoNepal
Summary of books in Nepali /”Energy” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
Posted on: September 14, 2020 Last updated on: October 6, 2020 Comments:0Categorized in: Learn, विज्ञान Written by: Admin
Summary of the book in Nepali /”Energy” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
हामी एक चलाख प्रजाति हौं, र यदि ईतिहासले हामीलाई केहि सिकाएको छ भने त्यो- कुनै पनि कठिन परिस्थितिमा बाँच्न र फस्टाउन हो।
“Energy” पुस्तकले हाम्रो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण उपकरणहरु कहाँबाट आउँदछ भन्ने कुरा बुझ्न मद्दत गरेर तपाईंलाई जानकार बनाउँदछ, हामीले ऊर्जालाई इतिहासदेखि कसरी प्रयोग गरेर यहाँ सम्म पुगेका छौं, र किन हामी यसलाई उपयोग गर्दा सावधान हुनुपर्छ भनेर जान्नु आवश्यक छ ताकि हामी राम्रो भविष्य निर्माण गर्न सकौँ।
परम्परागत समाजहरू तत्काल र निरन्तर पाइने सौर्य आयमा भर परेको देख्खिनु उपयोगी सादृश्य हो, तर आधुनिक सभ्यताले भने सञ्चय भएका यि सौर पूंजीलाई यस्तो दरमा खर्च गरिरहेको छ कि, यस सौर्य आयलाई सिर्जना गर्न आवश्यक परेको भन्दा सानो समयको अंशमानै यि Energy खर्च भईरहेको छ।
यदि मैले “उर्जा” शब्द उच्चारण गरे भने तपाईको दिमागमा के आउँछ? तपाईले बिहानको कफी सकिसकेपछि तपाईले पाउनु भएको Feeling हो कि? वा सम्भवत: मिठो निन्द्र पाएर उठ्नु भएको समयमा आउने Feeling। हुनसक्छ कि तपाईलको दिमागमा आफ्नो फिजिक्स Classes र केहि Equation पनि आउन सक्छन्।
जे भए पनि, यस वैज्ञानिक चर्चाको विषयले हाम्रो मानव प्रजातिको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, हाम्रो अस्तित्व भएदेखि। हामीले औजारहरू प्रयोग गरेर, गोरुहरूसहित खेतहरू जोत्दै, र हालसालै ( fossil fuel) जीवाश्म ईन्धनहरू कसरी जलाउने भनेर सिक्दै ऊर्जाको उपयोग गर्दै आएका छौँ। ऊर्जालाई अझ प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न उपायहरू पत्ता लगाउनु मानिस जातिको प्रगतिको मुख्य केन्द्र नै रहिआएको छ।
जबकि, पछिल्ला केही वर्षहरुमा हामीले ऊर्जा खपत गरेका तरीकाहरुको कारण केहि डरलाग्दो वास्तविकताको सामना गर्न सुरु गर्दैछौं। यो समय, भौतिक विज्ञानको कानूनलाई राम्रोसँग बुझ्नने र संसारको निति लाई निरन्तरता दिन स्वस्थ तरीकाहरू फेला पार्ने हो। र Vaclav Smilले पनि यिनै कुराहरु उनको किताब Energy: A Beginner’s Guide. मा सिकाएका छन्।
यहाँ ३ सबैभन्दा शक्तिशाली पाठहरू छन् जुन मैले यो पुस्तकबाट पत्ता लगाए;
मानिसका लागि उर्जाको अर्थ विभिन्न हुन सक्छ तर तपाईंले यसलाई जसरी बुझ्न चाहे पनि यो महत्त्वपूर्ण भने पक्कै छ।
(ऊर्जा) यस अनमोल संसाधन बिना पृथ्वीमा कुनै पनि कुरा बाँच्न सक्दैन।
हामीले विगतमा गरेका उर्जाको प्रयोगको नकरात्मक परिणामहरूलाई कम गर्न हावा, सौर्य, र विशेष गरी आणविक(nuclear) उर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ।
तपाईंको जीवनको यस महत्त्वपूर्ण अंशमा एक ऊर्जादायी छलफलको लागि तयार हुनुहुन्छ? आउनेहोस्!
पाठ १: हामीसँग ऊर्जाको विभिन्न परिभाषाहरू छन्, ती सबै महत्त्वपूर्ण छन्।
उर्जाको सन्दर्भमा हामी कसरी बोल्छौं, त्यसले हामीलाई देखाउँछ कि,हामी यसको वास्तविक अर्थ को बारेमा कदापि निश्चित छैनौं। उदाहरणका लागि हामी, “उनले वास्तवमै दर्शकलाइ energized गरे” जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गर्छौं। वा यदि कसैले triathlonको लागि कसरत गर्दै छन् भने हिमि भन्छौ: “उनीहरूले पौंडी खेले पछि energized(ऊर्जावान) feel गरे”।
तर के वक्ताले भीडमा बिजुली हाल्नका लागि केहि जादू गरे? र आखिर पौडी खेल्नाले वास्तवमा तपाईंको उर्जालाई(Energy) कम गर्दैन र ?
Energy भन्ने शव्दको उत्पत्ति ग्रीक शब्द energeia बाट भएको हो। जुन Aristotleद्वारा सिर्जना गरिएको थिइयो।उनको पहिलो परिभाषा अनुसार , यसले कार्य गति, वा कार्यलाई जनाउँछ।
हामिले आराम गर्दा, आफु नचलेको भएपनि, हाम्रो शरीरले भने हामिलाई जीवित रहनको लागि कडा परिश्रम गरिरहेको छ। अर्को शब्दमा भन्दा, हामी अहिले पनि ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छौं।
उर्जा एक जटिल विचार भएतापनि, यो हाम्रो ईतिहासको महत्त्वपूर्ण अंश हो। र हामी सोच्न सक्ने भन्दा बढी, हामीले यसको बारेमा थाहा पाउने छौं !
पाठ २: यो(ऊर्जा) बहुमूल्य स्रोत हाम्रो ग्रहमा सबै चीजको अस्तित्वको लागि एक महत्वपूर्ण घटक हो।
प्रकाशले छुने सबै चिजको उपस्थितिको लागि उर्जा हुनुपर्दछ। जीवित चीजहरू, मात्र भएपनि। तपाईंको शक्तिशाली-भोका काका हुन् वा अफ्रीकी सवानाको सिंह होस्र्ः ऊर्जा बिना, उ मर्नेछ। यो कसरी काम गर्दछ भनेर जान्न आउनुहोस्, गहिरो डुबुल्की लिनुहोस्।
ऊर्जा रूपान्तरणको बारेमा विचारमा राख्दा, यो (ऊर्जा रूपान्तरण) पर्किया जीवित चीजहरूले बाँच्नका लागि गर्छन्। उदाहरणका लागि बिरुवाहरू लिनुहोस्। तिनीहरूले पातहरूको माध्यमबाट सूर्यको किरण ग्रहण गर्छन् र त्यसपछि उनीहरूलाई खानाको रूपमा रूपान्तरण गर्छन्। उनिहरु यसरिनै बढ्छन् र बाच्न्छन्।
मानव र अन्य पशुहरूले पनि जीवित रहनको लागि उर्जा आदानप्रदान प्रक्रियाहरूको उपयोग गर्दछन्। तपाईको पेटमा रहेको ब्याक्टेरियाहरूले तपाईको शरीरलाई जटिल जैविक पदार्थहरू विच्छेद गर्न मद्दत गर्दछ, जसरि बोटबिरुवा / पातले, आफुलाई जीवित राख्न ऊर्जा प्राप्त गरिरहेको हुन्छ।
तपाईं वास्तवमा यसलाई जीवनको चक्र चलाउने प्रक्रिया जस्तो सोच्न सक्नुहुन्छ।
तर ती जीवहरू जो ऊर्जा सौर्य विकिरणको उत्पत्तिबाट टाढा छन् – तिनीहरूलाई शक्ति प्राप्त गर्न गाह्रो छ किनकि त्यहाँ पर्याप्त छैन। यसैले त्यहाँ जनावरहरू भन्दा धेरै बोटबिरुवाहरू र मांसाहारीहरू भन्दा बढि बिरूवा खानेहरू छन्। जनावरहरुलाई बोटबिरुवाहरू हुभन्दा धेरै Energyको आवस्यकता हुन्छ।
र, सबै प्राणीले उस्तै तरिकाले उर्जा प्रयोग गर्छन् भन्नेपनि हुदैन। उदाहरणका लागि, युवा प्राणीहरूले अधिक उमेरकाले भन्दा बढि ऊर्जा प्रयोग गर्छन्, र ब्वाँसोको physiologyले तिनीहरूलाई चितुवा भन्दा छिटो दौड्न मद्दत गर्दछ, तर ब्वाँसोहरु प्राक्रितिक रुपमा चितुवा भन्दा थिरै ऊर्जा खपत गर्ने र ढिलो दौडने गरि design गरिएका हुन्छन्।
पाठ ३: जबसम्म हामी नवीकरणयोग्य ऊर्जाको स्रोतहरू खोजेर र प्रयोग गरेर आफ्नो जिवन पद्धति चलाउछौँ, तबसम्म हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ।
जबसम्म हामी ऊर्जाको खपत गर्ने प्रक्रिया के हुनेछ/कस्तो हुनेछ भनेर सही रूपमा भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौं, हामीलाई थाहा छ हामीले यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ। जसरी यसको प्रयोजनको लागि माग बढ्दछ, यसलाई ठीकसँग ह्यान्डल Handle गर्ने ideaहरुको पनि आवश्यकता बढ्नेछ।
मानव र सृष्टि को वर्तमान को आवश्यकताहरु हेर्ने हो भने, हामीले fossil fuel जीवाश्म ईन्धनको प्रयोग गर्नु आवष्यकता छ। यो किनभने सबै नवीकरणीय स्रोतहरु, जस्तै सौर्य वा हावाले मानव जातिको सबै मागहरू पुरा गर्न सक्दैन। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले सदाका लागि जीवाश्म ईन्धनको खपतका नकरात्मक प्रभावहरूलाई झेलेर बस्नु आवश्यक छैन।
आणविक ऊर्जा Nuclear Energy हाम्रो र हाम्रो ग्रहको लागि स्वस्थ भविष्यको लागि एक शीर्ष विकल्प हो। यो चर्को रूपमा बिबादमा भएको विषय भएपनि, यो अहिलेको द्रिष्टिकोणमा भविष्यको लागि स्वच्छ र दीगो स्रोत हो ।
हाम्रो विगतको Nuclear गल्तीले हामीलाई, सुरक्षा उपायहरू सुधार गर्न मद्दत गरेर, धेरै कुरा सिकाएको छ। तर हामीले अझै पनि आतंकवादी हमला बिरूद्ध आणविक बोटबिरुवा जोगाउन सम्भावित तरिकाहरू पत्ता लगाउनु पर्छ।र यी सुविधाहरूबाट निस्केको फोहोर कसरी बेवास्ता गर्ने भन्ने प्रश्न को उत्तर पनि अजै सम्म पत्ता लागेको छैन।
अरू कुनै पनि कुरा भन्दा पहिले, हामीले केवल मानिसहरूलाई स्वीकार्न लगाउनु पर्छ कि, Nuclear Energy को उपयोग, यस ग्रह को अस्थिरतालाई ठीक गराउने सबै भन्दा राम्रो मौका हो।
तर यसको मत्लव यो हैन कि भविष्यमा यो भन्दा राम्रो विकल्पहरू आउन सक्दैनन्। हामी एक चलाख प्रजाति हौं, र यदि ईतिहासले हामीलाई केहि सिकाएको छ भने त्यो- कुनै पनि कठिन परिस्थितिमा बाँच्न र फस्टाउन हो।
Tagged as: Aristotle science book summary in nepali summary of book in nepali
Previous Post Must Watch Movies
Next Post THE MARDI HIMAL TREK – COMPLETE GUIDE AND ITINERARY-byaNepali Trekker